Atody voadoboka miaraka amin'ny ovy sy zucchini misy udd | Bezzia
Atody namboarina miaraka amin'ny ovy sy zucchini misy udd
Maria vazquez | 12/09/2021 10:00 | Salady sy legioma
Firy fomba fahandro amin'ny zucchini efa natolotray ve ity fahavaratra ity? Ary anio dia manampy iray hafa amin'ny bokin-tsika, ity Atody namboarina miaraka amin'ny ovy sy zucchini misy udd izay vitsy no ho afaka hanohitra. Ary ireo lovia toa tsotra dia ireo no tena ankafizinay indrindra.
Tsy mila 10 minitra akory ity atody mikororoka miaraka amin'ny ovy, zucchini ary patsabe ity, fa tsy hahatonga anao hihidy ao an-dakozia mandritra ny adiny iray koa. Na izany aza, dia mendrika azy tokoa ny vokany ary izany dia ny fitambaran'ny ovy nendasina tamin'ny tongolo mamy, ny zucchini malefaka ary ny udes masira nampidirina tamin'ny menaka fanosotra atolotry ny atody, ataovy safidy folo ity lovia ity.
Azonao atao ny manolotra azy amin'ny sakafo atoandro, miaraka amin'ny salady na amin'ny sakafo hariva ho lovia tokana. Dia a fomba fampisehoana zucchini samihafa sy manintona Mihevitra aho fa azonao atao ny mandresy lahatra na dia ireo tena tsy sahy manao an'io legioma io aza. Hanaporofo izany ve ianao?
Ovy 2, voahitsakitsaka ary notetehina (max. 4mm).
Tongolo fotsy 1 any julienne
Zucchini antonony 1 nohetezana kely
120 g ny sondro-boanjo manta
3-4 atody malalaka
Hetezo ny antsasaky ny ovy, amin'ny antsasaky ny volana, ary asio saosy lehibe mandra-pahatonga azy ho malemilemy, hampikomy matetika mba tsy hirehitra / hikikitra.
Avy eo, ampio ny tongolo ary amboary minitra roa minitra alohan'ny hanampiana ireo silaka zucchini tapaka roa, antsasaky ny volana, toy ny ovy. Atsaharo mandra-pitolon'ny zucchini.
Raha mahandro ny zucchini, amin'ny vilany hafa misy menaka kely Boribory ny sambo.
Rehefa malemy ny zucchini, vanim-potoana, ampio ny makamba ary afangaro amin'ny spatula.
Farany, ampio ny atody, vaky ny atody, afangaro ary apetrakao araka ny tsirony.
Ankafizo ireo atody vao nototoina niaraka tamin'ny ovy sy zucchini niaraka tamin'io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fomba fanamboarana » Salady sy legioma » Atody namboarina miaraka amin'ny ovy sy zucchini misy udd
Fanalahidy hampihenana ny fitaintainanana
Dingana tena ilaina amin'ny fahazarana tsara tarehy